I-Legal crossover AI idivayisi yezokwelapha umgwaqo wezamabhizinisi
UmsunguliMr.Cuiowaphothula eNyuvesi yaseSichuan, waba nomsebenzi ojabulisayo embonini yezomthetho.Njengoba ayehlale echayeka embonini yezokwelapha, kanye nenqwaba YEZIKHUNGO Zokulawula Izifo nokuvimbela kanye namalabhorethri, waqhamuka nombono wokuqala ibhizinisi.
Ufunde ukuthi okwamanje, izinsiza zezokwelapha zasekhaya zingaphansi kwengcindezi enkulu, kunokuntuleka kodokotela abasezingeni eliphezulu, kanye nekhwalithi yedatha yokuhlolwa nayo idinga ukuthuthukiswa.Ukwengeza, emsebenzini onzima, ukuhlaziya okwenziwa ngesandla kungahlulelwa kuphela ngokuhlangenwe nakho kodokotela, kodwa ngokuvamile kuvame ukuholela ezingeni eliphezulu lokuxilongwa okungalungile nokuxilongwa okuphuthelwe.
Kulo mongo, wayeka umsebenzi wakhe wokuba ummeli futhi wazinikela ekuqaleni ibhizinisi.I-Shengshi Hengyang ngesi-Sichuan yaba khona ngale ndlela.Ngenxa yokushoda kwezinsiza ezahlukene ngesikhathi eqala ibhizinisi, uphinde wafaka isicelo futhi wathola uxhaso lwendawo yokufukamela yethimba losomabhizinisi ophikweni lwezabasebenzi kanye noMnyango Wezokuphepha Komphakathi.
Kusukela yasungulwa, i-Shengshi Hengyang izibophezele ekuhlinzekeni amathuluzi asizayo anembile ezibhedlela, IZIKHUNGO Zokulawula Izifo kanye nokuvimbela kanye namalabhorethri ngokusebenzisa ubuchwepheshe bokufunda okujulile, nokuhlinzeka ngezixazululo eziphumelelayo ezikhungweni zezokwelapha ezihlukahlukene.
Ngemizamo ehlukahlukene yeqembu, i-Shengshihengyang ifinyelele ukukhula ngokushesha futhi ithole ukuthandwa emkhakheni ohlukene.Futhi wabamba iqhaza ekwakhiweni kwamaphrojekthi amaningana kazwelonke.Ubambe iqhaza ekwakhiweni kwelabhorethri kazwelonke yengculazi ngo-2008, ilebhu kazwelonke yomkhuhlane ngo-2009, ilebhu kazwelonke yobungozi bokudla kanye nenethiwekhi yokuhlonza igciwane ngo-2015. Ngo-2020, saqhubeka negalelo ekulweni ne-COVID-19, futhi sathumela ukuhlolwa kwe-COVID-19. imishini kanye nempahla yamahhala ku-CDC yendawo ngemizamo eyahlukahlukene ngesikhathi lapho kunokushoda okukhulu kwemishini yokuhlola i-COVID-19 e-China, ukuze umgomo we-CDC yokubambisana ufezeke.Khonamanjalo, uShengshi Hengyang naye uthole ukunakwa nodumo embonini.
Njengamanje, ibhizinisi eliyinhloko le-shengshi Hengyang le-AIDS, isifo sofuba, isifo, i-anthrax, ukuvimbela izifo zasemsebenzini, ukuphepha kokudla nezinye izici.
Ngalesi sikhathi, imboni yezohwebo yangaphandle yaseShayina nayo yathuthuka ngokushesha, ngakho-ke umphathi wamisa uMnyango Wezohwebo Zangaphandle ngaphakathi kwenkampani ngo-2017. Ngemva kweminyaka emibili yemizamo, uMnyango Wezohwebo Lwangaphandle waqhubeka nokukhula futhi ekugcineni wazimele futhi wasungula i-LUORON Foreign Trade Company. .
Ngokuzayo, umgomo wethu we-Luoron uwukusebenzela umphakathi, ukuzuzisa isintu kanye nokuba negalelo eliphezulu embonini yokuhlola yezokwelapha emhlabeni wonke enamathela emfundisweni ye-Shengshihengyang.